စိုးရိမ်ပူပန်လူတွေက၏ဦးနှောက်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားရိပ်မိနိုင်ပါစေ - သတင်း Rule
တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ် generalized စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူလူမသိစိတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများအဖြစ်အန္တရာယ်ကင်းသောအရာတို့ကိုတံဆိပ်ကပ်ကွောငျးဖျောပွသ, သူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုရှေ့ဆက်ဖို့အစေခံစေခြင်းငှါအရာ. ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဂျာနယ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Current Biology.
စိတ်ပညာရှင်လက်တွေ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတော်များများပုံစံအမျိုးမျိုးအသိအမှတ်ပြုရန်. အသုံးအများဆုံးယေဘူယျသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ, သို့မဟုတ်ထွေအုပ်, လူမကြာခဏစိတ်ပူစရာဘာမှမရှိဘူးရဲ့တူကပုံရသည်လျှင်ပင်အလွန်စိုးရိမ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခံစားရသည့်အတွက်.
24830	5 စိုးရိမ်ခြင်း, ဖရိုဖရဲ, ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်
← Livescribe Smartpen3Black က Edition ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း7Virtual Reality ဘို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အသုံးအမှုများ →